Mogadishu Journal » 2021 » September » 10
Lebanese presidency announces government formation, ending a 13-month deadlock that worsened the country’s economic situation. 10 Sep 2021 Beirut, Lebanon – Prime Minister Najib Mikati and President Michel Aoun have signed a decree forming a new government in the presence of...
Kooxo hubeysan oo Nairobi ka afduubtay Aqoonyahan Soomaali ah & Booliska oo..
Prof.Cabdiwahab Sheekh Cabdisamad oo ka tirsan aqoonyanada Soomaalida ayaa lagu afduubtay Magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Koox hubeysan oo watay gaari ayaa magaalada Nairobi ka watay maalintii Arbacada, ilaa hada nolol iyo geeri midna laguma hayo. Prof. C/wahaab...
Deni oo gaaray degaanka Garacad, kormeerna ku sameeyey dekeda cusub (Sawirro)
Madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Deni iyo Wefdi ballaaran oo uu hoggaaminaayo ayaa maanta safar shaqo ku gaaray Magaaladda Garacad ee gobolka Mudug. Madaxweynuhu waxa uu kormeeray dhismaha Dekedda Garacad oo meel gebogebo ah maraysa, isagoona mid mid u dul istaagay...
Nin u dhashay dalka Nigeria ayaa lagu qabtay degaan lagu magacaabo Akwa Ibom isagoo Jawaan ku sidda ilmo yar oo uu dhalay xili uu doonayey inuu iibiyo ilmahaas oo 3 jir ahaa. Booliska ayaa gacanta ku dhigay ninkan kadib markii la waydiiyay sababta ku kaliftay arintan ayuu sheegay...
Taliban oo xarig iyo jirdil kula kacday weriyeyaal ku sugan Magaalada Kabul (Sawirro)
Xooggaga Taliban ayaa la sheegay iney geysteen jirdil iyo xarig lagula kacay weriyeyaal ku sugan magaalada Kabul kadib markii ay damceen inay tebiyaan dad dibed baxayay. Sawirro lagu baahiyay internet-ka ayaa muujinaya laba weriye oo ka tirsan wargeyska Etilaatroz, kuwaasoo...